काठमाडौँ, ८, कात्तिक । कोरोना भाइरस संक्रमण महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अमेरिकाले नेपाललाई अनुदान स्वरुप दिएको १ लाख डोज फाइजर खोप नेपाल आइपुगेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासका अनुसार अमेरिकाले कोभ्याक्ससुविधा माफर्त नेपाललाई १ लाख ६२० डोज अनुदानमा दिएको हो । खोप विहान ९ बजे कतार एयरको नियमित उडानबाट काठमाडौं ल्याइएको दूतावासले जनाएको छ । खोप टेकुस्थित आपूर्ति शाखामा भण्डारणका लागि राखिने जनाइएको छ । अमेरिकाले यसअघि १५ लाख डोज...
अमेरिकाबाट आज एक लाख डोज खोप काठमाडौँ आइपुग्ने
काठमाडौँ, ८, कात्तिक । अमेरिकाबाट आज नेपाल एक लाख बढी डोज खोप आइपुग्ने भएको छ । अमेरिकाले नेपालकालाई कोरोना भाइरस संक्रमण महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थप एक लाख ६ सय २० डोज मात्रा फाइजर खोप आज काठमाडौँ आइपुग्ने भएको छ । अमेरिकी दूतावासले आइतबार ट्वीट गर्दै उक्त खोप नेपालमा सोमबार आइपुग्ने बताएको थियो । कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आए लगतै ४ देखि ११ वषएसम्मका बालबालिकालाई...
भारतमा एक अर्ब डोजभन्दा बढी कोरोना खोप लगाइयो
काठमाडौँ, ४, कात्तिक । भारतले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियानमा ठूलो सफलता प्राप्त गरेको छ । बिहीबार भारतमा १ अर्ब डोजभन्दा बढी खोप लगाइएको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म बिहीबार मात्रै भारतमा करिब १५ लाख डोज खोप लगाइसकिएको छ । एक अर्ब डोज खोप पूरा भएको अवसरमा बिहीबार भारतका विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमको आयोजना गरिँदैछ । भारतीय स्वास्थ्यमन्त्री मनसुख मान्डवीयले दिल्लीस्थित लालकिलामा कैलाश खेरले गाएको गीत सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । भारतले...
काठमाडौँ, ४, कात्तिक । नेपालमा हालसम्म कुल जनसंख्याको २८।२ प्रतिशत जनसंख्याले कोभिड–१९ विरुद्धको पहिलो मात्रा खोप लिइसकेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कुल जनसंख्या ३ करोड ३ लाख ७८ हजार ५५ जना रहेकोमा हालसम्म ८५ लाख ६२ हजार ३ सय ६५ जनाले पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका छन् भने ६४ लाख ८५ हजार ९ सय २३ जनाले पूर्ण मात्रा खोप लिइसकेका छन्। १८ वर्षमाथिका ४३ प्रतिशतले पहिलो मात्रा र ३२।६ प्रतिशतले...
काठमाडौं महानगरले १८ वर्ष माथिकालाई कोरोना खोप लगाउने
काठमाडौँ, २२, असोज । काठमाडौँ महानगरले १८ वर्षमथिका सबै नागरिकलाई आजदेखि दसैँलक्षित कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसअघि खोप केन्द्र रहेका ३२ वटै वडाका खोप केन्द्र र केही थप गरिएका केन्द्रबाट यही असोज २४ गतेसम्म भेरोसेलको पहिलो मात्रा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको हो। महानगरपालिकाका ३२ खोप केन्द्रबाहेक नेपाल प्रहरी अस्पताल, वीर अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल र वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालबाट नागरिकले सेवा लिन सक्नेछन्। कामपा...
कर्णालीका दुई लाखभन्दा बढी नागरिकले लगाए कोभिडविरुद्धको खोप
काठमाडौँ, १९, असोज। कर्णाली प्रदेशमा दुई लाखभन्दा बढी नागरिकले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएका छन् । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार अहिलेसम्म प्रदेशका १० वटै जिल्लामा गरेर दुई लाख ४१ हजार २४९ जना अर्थात् २२ प्रतिशत जनसङ्ख्याले पूर्ण खोप लगाएका हुन् । कर्णाली प्रदेशमा गएको माघदेखि खोप अभियान सञ्चालन भएको थियो । कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने करिब १८ लाख २४ हजार जनसङ्ख्यामध्ये १८ वर्षमाथिका १० लाख ९४ हजार ४५ जना छन् ।...
कर्णालीका २२ प्रतिशत नागरिकले लगाए कोरोनाविरूद्ध पूर्ण खोप
काठमाडौँ, १७, असोज । कर्णाली प्रदेशका २२ प्रतिशत नागरिकले कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका छन्।कुल जनसंख्या १८ लाख २४ हजार १३१ मध्ये २ लाख ४१ हजार २४९ जनाले पूर्ण खोप लगाएको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ। जसमध्ये डोल्पाका ६ हजार ६ सय ३३, मुगुका ९ हजार ६ सय ८, हुम्लाका ६ हजार ८ सय ५३, जुम्लाका २१ हजार ६४, कालीकोटका १५ हजार १०८, दैलेखका ३२ हजार ३७६ जनाले पूर्ण...
पत्ता लाग्याे कोभिडविरूद्धकाे खाने चक्कीः 'जोखिम आधा घटाउने' विश्वास
काठमाडौँ १६ असोज।परीक्षणमा रहेको एउटा खाने औषधिले कोभिडको गम्भीर लक्षण भएका बिरामीको अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था र मृत्यु आधाले घटाउने अन्तरिम क्लिनिकल परीक्षण परिणामले देखाएको छ। मोल्नुपिरभिर चक्की कोभिडका बिरामीलाई दिनको दुईपटक दिइएको थियो। अमेरिकी औषधि उत्पादक कम्पनी &#39;मर्क&#39;ले परीक्षण परिणाम अत्यन्त सकारात्मक भएकाले बाह्य अनुगमनकर्ताहरूले परीक्षणकाल छोट्याउन अनुरोध गरेको जनाएको छ। उसले अमेरिकामा अबको दुई हप्तामा आपत्‌कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिन निवेदन दिने बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनका प्रमुख मेडिकल...
कञ्चनपुरमा एक लाखलाई दुवै डोज
काठमाडौँ, १४, असोज । कञ्चनपुरमा एक लाख बढीले कोरोना विरुद्धको पुर्ण खोप पाएका छन् । जिल्लामा माघदेखि सुरु भएको खोप अभियान अन्तरगत विभिन्न चरणमा गरेर १ लाख २२७ जनाले पहिलो र दोस्रो मात्रा खोप लगाएका हुन् । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार माघदेखि जेठसम्म ३० हजार २ सय २४ जनाले कोभिशिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका थिए । उनीहरूमध्येकै ६ हजार ७ सय ४० जनाले मात्रै दोस्रो मात्रा पाएका थिए । कोभिशिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका २४ हजार बढीले...
काठमाडौँ, १४, असोज । देशभर हालसम्म लक्षित जनसङ्ख्याको २८ प्रतिशतभन्दा धेरैले पूर्ण खोप लगाइसकेको बताइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधबार एक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै हालसम्म एक करोड २९ लाख मात्रा खोप लगाइसकिएको जानकारी दिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलकाअनुसार यसमध्ये २८ प्रतिशतले पूर्ण मात्रा लगाएका छन् । उनका अनुसार नेपालमा हालसम्म एक करोड ७८ लाख ५८ हजार ७१० मात्रा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप आएको छ । आएका...
मंसिर र पुसमा १७ वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोरोनाको खोप लगाउने
काठमाडौँ, १२, असोज । सरकारले आगामी मंसिर र पुसमा १२ देखि १७ वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोरोनाको खोप लगाउने लक्ष्यसहित खोप आयात अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर जनसंख्या र संक्रमणको जोखिमलाई आधार मानेर सो उमेर समूहका बालबालिकाका लागि खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हो । मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले कतिपय मुलुकले बालबालिकालाई खोप लगाई रहेको जनाउँदै नेपालमा पनि १२ देखि १८ वर्ष उमेर समुहका बालबालिकालाई...
काठमाडौँ, ११, असोज । धरानमा असोज ११ र १२ गते कोरोना विरुद्धको पहिलो मात्रा चिनियाँ भेरोसेल खोप लगाइने भएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा ४५ वर्ष देखि माथिकालाई लगाइने भएको हो । स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताले असोज ११ गते वडा नं. १ धरान स्वास्थ्य चौकी छाताचौक, वडा नं. २ सिंहदेवि मन्दिर, वडा नं. ३ भानु स्मृति मावि, वडा नं. ४ पुरानो ४ नम्बर वडा...
काठमाडौँ, ९, असोज । एक लाख मात्रा फाइजर खोप दसैँअगावै नेपाल ल्याइने भएको छ । आउने मिति यकिन नभए पनि दसैँअगावै खोप आइपुग्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् । अमेरिकन कम्पनी फाइजरले उत्पादन गरेको एक लाख मात्रा खोप कोभ्याक्स सुविधामार्फत आउन लागेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा। विवेक कुमार लाल कर्णले खोप छिट्टै आउने जानकारी दिए । उनका अनुसार खोप अस्पतालमा रहेका दीर्घरोगी, क्यान्सर, मिर्गौला...
काठमाडौँ, ७, असोज । नेपालमा करिब ७९ लाख नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार कोरोनाविरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको सङ्ख्या ७८ लाख ९० हजार ३७५ रहेको छ । त्यस्तै पहिलो मात्रा लगाउनेको सङ्ख्या ६२ लाख ६२ हजार ७८० पुगेको छ । पूर्ण मात्रा खोप लगाउने र पहिलो मात्रा मात्र लगाउने गरी एक करोड ४१ लाख ५३ हजार १५५ जनामा कोरोनाविरुद्धको...
पुसदेखि बालबालिकालाई पनि खोप लगाउने तयारी
काठमाडौँ, ६, असोज । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले पुस महिनाबाट बालबालिकालाई पनि कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। खोपका लागि विश्वव्यापी साझेदारी (गाभी)मार्फत् ४० लाख मात्रा मोर्डना खोप ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्री उमेश श्रेष्ठले बताए। बुधबार स्वास्थ्य समितिको बुधबार बसेको बैठकमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले बालबालिकाका लागि एक करोड मात्रा खोप आउने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। मोर्डनाको ४० लाख डोज र फाइजरको ६० लाख डोज खोप ल्याउन...
काठमाडौँ, ४, असोज । यहाँका चार स्थानीय तह कोरोना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । एक नगर र तीन गाउँपालिका कोरोना सङ्क्रमणमुक्त भएका हुन् भने पछिल्लो दुई दिनदेखि जिल्लामा थप सङ्क्रमण देखिएको छैन । कोरोनामुक्त हुनेमा मण्डनदेउपुर नगरपालिका तथा रोशी, तेमाल र खानीखोला गाउँपालिका छन् । चौँरीदेउराली र महाभारत गाउँपालिकामा एकरएक सङ्क्रमित रहेको जिल्लास्थित कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारसम्बन्धी केन्द्र (डीसीसीएमसी)ले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार पछिल्लो दुई दिनदेखि जिल्लामा थप सङ्क्रमण...
आजदेखि काठमाडौँका १४५ खोप केन्द्रमार्फत भेरोसेलको दोस्रो खोप लगाइने (केन्द्रसहित)
काठमाडौँ, ४, असोज । सरकारले आज (सोमबार) देखी कोरोना भाइरस संक्रमण महामारी विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार असोज ४ देखि ६ गतेसम्म खोप लगाइने छ । मन्त्रालयका अनुसार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले १४५ खोप केन्द्रमार्फत भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने तयारी सकेको छ । उक्त खोपका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकामा ३२, चन्द्रागिरिमा १५, तारकेश्वरमा ११, बूढानीलकण्ठमा १३, टोखामा ११, नागार्जुनमा १०, कीर्तिपुरमा १०, दक्षिणकाली,...
भोलीदेखि काठमाडौँका १४५ खोप केन्द्रमार्फत भेरोसेलको दोस्रो खोप लगाइने (केन्द्रसहित)
काठमाडौँ ३ असोज । सरकारले भोली (सोमबार) देखी पुनः कोरोना भाइरसविरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने भएको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार असोज ४ देखि ६ गतेसम्म खोप लगाइने छ । मन्त्रालयका अनुसार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले १४५ खोप केन्द्रमार्फत भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने तयारी सकेको छ । उक्त खोपका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकामा ३२, चन्द्रागिरिमा १५, तारकेश्वरमा ११, बूढानीलकण्ठमा १३, टोखामा ११, नागार्जुनमा १०, कीर्तिपुरमा १०, दक्षिणकाली, गोकर्णेश्वर, शङ्करापुर...
५० लाख कोरोना विरुद्धको चिनियाँ खोप बंगलादेश पुग्यो
काठमाडौँ, ३, असोज। बंगलादेशमा चीनमा निर्मित कोरोनाविरुद्धको थप ५० लाख खोप लगिएको छ । सो खोप शनिबार बगलादेश पुगेको बताइएको छ । चिनियाँ कम्पनी सिनोफार्मद्धारा निर्माण गरिएको सो खोप चीनको सहयोगमा बगलादेश पुगेको बताइएको हो । बंगलादेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता मैदुल इस्लाम प्रोधानले सो कुराको जानकारी दिए । प्रवक्ता मैदुलले भने–शनिबार बंगलादेशको राष्ट्रिय एयरलाइन्स् विमान बंगलाबाट अपरान्ह २ बजे ५० लाख डोज खोप बंगलादेश आइपुगेको छ । चीन सरकारसँग भएको महामारी...
काठमाडौँ१ असोज ।कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप उपत्यकामा अधिकांशले लगाइसकेका छन् । यो खोप उपत्यकामा पहिलो मात्रा ४४.३३ प्रतिशत र पूर्ण मात्राको खोप ४० प्रतिशतले लगाएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा १५ लाख ५५ हजार आठ सय ९५ जनाले पहिलो मात्रा र ११ लाख ७१ हजार चार सय २० पूर्ण मात्राको खोप लगाइसकेका छन् । मुलुकभरि पहिलो मात्रा १९.९ र पूर्ण मात्रा १८ प्रतिशतले खोप लगाइसकेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक...
काठमाडौँ, १, असोज । सरकारले चीनबाट खरिद गरेको ४४ लाख डोज भेरोसेल खोप नेपाल आइपुगेको छ । खोप ल्याउन हिजो राति ११ बजे नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान चीन गएको थियो । सरकारले चीनसँग पछिल्लो पटक ६० लाख डोज भेरोसेल खोप खरिद गरेको थियो। जसमध्ये १६ लाख डोज खोप भदौ ४ र ५ गते नै आइसकेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको प्रबन्ध निर्देशक डिमप्रकाश पौडेलले जहाजले २ बजे खोप काठमाडौं ल्याएको...
काठमाडौँ, १, असोज । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १९.०१ प्रतिशत नागरिकले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएका छन् । गत माघयता थालिएको खोप अभियानअन्तर्गत कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीदेखि विभिन्न लक्षित समूह गरी यहाँ चार लाख ७५ हजार ४१२ जनाले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । झण्डै २५ लाख जनसङ्ख्या रहेको सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लामा कोरोनाविरुद्धको पूर्ण खोप (दुवै मात्रा) लगाउने काम सकिएको छ । पहिलो मात्रा लगाउनका लागि केन्द्रबाट खोप...
फ्रान्सद्वारा ६६ लाख ७२ हजार बराबरको स्वास्थ्य उपकरण सहयोग
काठमाडौँ, ३१, भदौ । फ्रान्स सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण महामारी विरुद्ध नेपाललाई थप स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग गरेको छ। फ्रान्सले अक्सिजन प्लान्टका निम्ति आवश्यक पर्ने अतिरक्त सामाग्री र उपकरण प्रदान गरेको हो। फ्रान्सेली कम्पनी नोभेरले उत्पादन गरेका अक्सिजन प्लान्टमा प्रयोग हुने अतिरिक्त पार्टपुर्जा नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत फस्वाँ जेभिए लेजेले विभिन्न आठ अस्पतालका प्रतिनिधिलाई आज हस्तान्तरण गरेका हुन्। नेपालगंज शिक्षण अस्पताल, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल, फेवा सिटी हस्पिटल र फिसटेल हस्पिटल, ओखलढुङ्गा सामुदायिक...
एकैदिन २ लाख ९९ हजारले लगाए कोरोनाविरुद्धको खोप
काठमाडौँ ३१ भदौ।पछिल्लो केही दिन यता नेपालमा लगातार कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या घट्दै गइरहेको छ । बुधबार १७ सय ६० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । बुधबार एकैदिन कोरोनाविरुद्धको विभिन्न खोप २ लाख ९९ हजार १ सय ३१ जनाले लगाएका छन् । पछिल्लो २४ घन्टामा बाग्मती प्रदेशमा कोरोना भाइरसविरुद्ध एष्ट्रेजेनिका खोपको पहिलो मात्रा ४२ सय ७५ जनाले लगाएका छन् भने दोस्रो मात्रा २७ जनाले लगाएका छन् । यसैगरी, भेरोसेल खोपको पहिलो...
बालबालिकाका लागि फाइजर खोप नेपालमा अनुमति
काठमाडौँ, २७, भदौ । औषधि व्यवस्था विभागले कोरोना विरुद्ध प्रयोग हुँदैआएको फाइजर खोप बालबालिकाका लागि अनुमति दिएको छ । विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत् वितरणका लागि फाइजरलाई अनुमति दिइएको बताए । सरकारले ल्याएर प्रयोग गर्न फाइजरलाई आपतकालीन अनुमति दिइएको छ । कोभ्याक्स फ्यासीलिटी अन्तर्गत् खोप आउने हो । सरकारले १२ वर्ष उमेर समूमाथिकालाई फाइजर खोप लगाउने तयारी थालेको हो । कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत् केही दिनमै एक लाख मात्रा...
दुई वर्षका बालबालिकालाई दिन थालियो कोरोनाविरुद्धको खोप
काठमाडौँ, २५, भदौ । क्यूबाको सरकारले दुई वर्षका बालबालिकालाई पनि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप दिन थालेको त्यहाँको सरकारी मिडियाले जानकारी दिएको छ । बालबालिकालाई स्कूल पठाउन लागि खोप अभियान सुरु गरिएको जानकारीमा उल्लेख छ । संसारका अन्य देशले बालबालिकालाई अन्त्यमा मात्रै खोप प्रदान गर्ने बताइरहँदा क्यूबा भने बालबालिकालाई कोभिडविरुद्धको खोप दिने पहिलो देश बनेको छ । क्यूबाले आफ्नो देशमा उत्पादित खोप बालबालिकाका लागि सुरक्षित भएको सेप्टेम्बरमा बताएको थियो ।महामारीका अवधिभर क्यूबामा भौतिक उपस्थितिमा...
काठमाडौँका ४० प्रतिशतले लगाए कोरोनाविरुद्धको पुर्ण खोप
काठमाडौँ, २०, भदौ । काठमाडौँमा ४० प्रतिशतले मानिसले कोरोना भाइरस संक्रमण महामारी विरुद्धको पूर्ण खोप लगाइसकेका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय काठामाडौँका प्रमुख बद्रीबहादुर खड्काले शुक्रबारसम्म पहिलो मात्रा खोप लगाउने ४८ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिँदै पूर्ण खोप लगाउने जनसङ्ख्या ४० प्रतिशत पुगेको बताए । उनका अनुसार काठामाडौँमा पूर्ण खोप लगाउनेको जनसङ्ख्या शुक्रबार बेलुकासम्म नौ लाख १४ हजार ४८५ जना पुगेको छ भने पहिलो मात्रा लगाउनेको जनसङ्ख्या ११ लाख सात हजार ९८० जना...
सुदूरपश्चिममा ६ लाखलाई कोरोनाविरुद्धको खोप
काठमाडौँ, १८, भदौ । यहाँसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म ६ लाख बढी नागरिकलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाइएको छ । प्रदेशका नौवटै जिल्लामा गरी हालसम्म पहिलो मात्रा लगाउनेको सङ्ख्या छ लाख एक हजार ५१८ पुगेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । पहिलो मात्रा लगाउनेमा सबैभन्दा बढी कैलालीका एक लाख ९५ हजार ३६१ व्यक्ति रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले जानकारी दिए । यस्तै कञ्चनपुरमा एक लाख सात हजार १६३, बैतडीमा ५७...
गाभीले एक लाख डोज फाइजर खोप उपलब्ध गराउने
काठमाडौँ, १६, भदौ । कात्तिकको पहिलो सातासम्ममा एलायन्स फर गाभीले अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने फाइजर खोप नेपाल आइपुग्ने भएको छ । गाभीले एक लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. तारानाथ पोखरेलले जानकारी दिए । ुखोप आयात उपलब्ध गराउने हामीलाई आश्वासन प्राप्त गरिसकेका छौं,ु पोखरेलले भने,ुखोप राख्‍न गाभीले फ्रिजसमेत उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपालले पनि आवश्यक भण्डारणको तयारी गरिरहेको छ । फाइजर खोप माइनस ७० डिग्री तापक्रममा...
नेपालमा दैनिक तीन लाख व्यक्तिलाई कोरोनाको खोप
काठमाडौँ, ११, भदौ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले नेपालमा दैनिक तीन लाख व्यक्तिले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइरहेको बताएका छन् । सरकारले तीव्र गतिमा कोरोना खोप लगाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै उनले हालसम्म ९० लाख ७७३ जनाले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसकेको बताए । प्रतिनिधि सभा शिक्षा स्वास्थ्य समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले सरकारले खोप लगाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । विकट जिल्लामा खोप लगाउनका लागि प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले जापानले...
आजदेखि बाढी प्रभावितका लागि कोरोनाविरुद्धको खोप
काठमाडौँ १० भदौ। हेलम्बु–मेलम्ची बाढी प्रभावित १८ वर्षमाथिका २० हजारका लागि कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गरिएको छ । आजदेखि सर्वसाधारणले लगाउन मिल्ने गरी खोप केन्द्रमा पठाइसकिएको वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दुर्गादत्त चापागाईले जानकारी दिए । सिन्धुपाल्चोकका बाढी प्रभावित पाँचपाखरी थाङपाल गाउँपालिकाका लागि आठ हजार, मेलम्ची नगरपालिकाका लागि सात हजार र हेलम्बु गाउँपालिकाका लागि पाँच हजार मात्रा दुई हजार भायल खोप स्थानीय तहमा यसअघि तोकिएका खोप केन्द्रमा पठाइसकिएको चापागाईले बताए । बाढी प्रभावितलाई दुई...
काठमाडौंमा शुक्रबारदेखि तीन दिनसम्म भेरोसेल खोप लगाइने, यी हुन् खोप केन्द्र
काठमाडौँ, १०, भदौ । सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा भदौ ११ गते शुक्रबारदेखि १३ गतेसम्म काठमाडौँ जिल्लामा लगाउने भएको छ।तीन दिन भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाएकालाई दोस्रो मात्राको खोप दिन थालेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख बद्रीबहादुर खड्काले बताए। उनकाअनुसार भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगएका ५० वर्ष वा सोभन्दामाथि उमेरका समूहका सबैलाई दोस्रो मात्रा दिइने छ। यस्तै विश्वविद्यालय र विद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालकले पनि खोप...
गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ८५ लाखको स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण
काठमाडौँ, ९, भदौ । प्रतिमान निमा स्मृति प्रतिष्ठानले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण महामारीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । प्रतिष्ठानलाई अमेरिकाबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक स्वाती थापाले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई हस्तान्तरण गरे । प्रतिष्ठानले झण्डै रु ८५ लाख बराबरका गाउन आइसोलेशन, फेसशिल्ड, मास्क, एन–९५ मास्क, डिजिटल थर्मोमिटर, पिपिइ सेट, इमर्जेन्सी रिलिफ शय्या, पञ्जालगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वभर कोभिड–१९ को...
कोरोनाविरुद्धको स्पुतनिक भी भ्याक्सिनको नयाँ संस्करण तयार
काठमाडौँ ६ भदौ । रुसी कोरोना खोप निर्माता कम्पनी ग्यामलेया सेन्टरले स्पुतनिक भीको नयाँ संस्करण तयार गरेको छ । भ्याक्सिनले नयाँ भेरिएन्टको कोरोनालाई परास्त पार्ने क्षमता रखेको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त भ्याक्सिनलाई तत्कालै कुनै किसिमको अपडेट गर्न नपर्ने समेत कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको निर्देशक एलेकजेन्डर गिंन्टवर्गको भनाईलाई उदृत गर्दै सञ्चारमाध्यम तासले लेखेको छ, ‘हामीले स्पुटनीक भीको नयाँ संरचना तयार पारेका छौँ । रुसी रेगुलेटरले भ्याक्सिन चेन्ज गर्न आदेश दिएपछि...
काठमाडौँमा एस्ट्राजेनेका खोपको पहिलो मात्रा दिइँदै
काठमाडौँ २ भदौ। काठमाडौँ स्वास्थ्य कार्यालयले कोरोना भाइरसविरुद्धको एस्ट्राजेनिका खोपको पहिलो मात्रा सर्वसाधारणलाई दिन थालेको छ । विद्युतीय दर्ता गराएका सर्वसाधारणलाई कार्यालयले एस्ट्राजेनिकाको पहिलो मात्रा दिइन थालेको हो । कार्यालय प्रमुख बद्रीबहादुर खड्काले यही भदौ १ गतेदेखि विद्युतीय दर्ता गराएका सर्वसाधारणलाई खोप लगाउन थालिएको जानकारी दिए । जापान र भूटानबाट आएको एस्ट्राजेनिका खोपको दोस्रो मात्रा लगाएको बचेपछि विद्युतीय दर्ता गराएका सर्वसाधारणलाई पहिलो मात्रा खोप दिन थालिएको हो । भूटानबाट दुई लाख...
परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीलाई खाेप दिइने
काठमाडौँ २७ साउन । सरकारले विश्वविद्यालयको परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आज बुधवार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अन्य विश्वविद्यालयका परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरूलाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिने निर्णय गरेको हो ।खोप लगाउने विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा प्रवेश पत्र साथमा लैजानुपर्ने बताईएको छ । परीक्षा केन्द्रबाट सङ्क्रमण फैलने डर रहेको भन्दै परीक्षार्थीहरूले खोपको माग गर्दै त्रिवि घेराउलगायतका विरोधका कार्यक्रमसमेत गरेका थिए ।
काठमाडौँ २७ साउन । किटजन्य रोगको अन्वेषणका लागि इन्टोमोलोजी ल्याब सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रु १५ लाखको लगानीमा स्वास्थ्य कार्यालयमा सो ल्याब स्थापना गरेको छ ।किटजन्य रोग बाहकका रूपमा रहेका लामखुट्टे र भुसुनाजस्ता किटाणुबारे जानकारी लिन सुदूरपश्चिम प्रदेशमै पहिलोपटक सो ल्याब स्थापना गरिएको राजपुरस्थित डोटी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक गुणराज अवस्थीले बताए । “मानव स्वास्थ्यमा हानी पु¥याउने विभिन्न किटाणुको अध्ययन गर्ने एकमात्रै प्रयोगशाला मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडामा मात्र छ”,...
कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सुधार्न कार्ययोजना बनाउँदै डब्लुएचओ
काठमाडौँ २७ साउन । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले कर्णाली प्रदेशको कमजोर स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्ने योजनालाई अघि सारेको छ । संगठनले त्यसका लागि कार्ययोजना निर्माण गरिने बताएको छ । डब्लुएचओले गर्दै आएको कामका बारेमा जानकारी दिन मंगलवार सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत डब्लुएचओका नेपाल प्रमुख डा राजेश पाण्डवले स्वास्थ्य अवस्थामा देखिएको कमजोरीलाई सुधार गर्न डब्लुएचओले विशेष गृहकार्य गरिरहेको बताए । यसका लागि कर्णालीको कार्ययोजना अनुरूप अघि बढ्ने जनाउँदै नेपाल प्रमुख डा पाण्डवले...
ज्येष्ठ नागरिकलाई घरघरमै खोप पुर्याउदै नगरपालिका
काभ्रे २६ साउन । ज्येष्ठ नागरिकप्रति स्थानीय सरकार कति जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने उदाहरण काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकाले पुष्टि गरेको छ । अहिले उनीहरुलाई नगरपालिकाले कोरोना विरुद्धको खोप घरघरमा लगाइ उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरिरहेको छ । नमोबुद्ध –८ का १०२ वर्षीय अमन्तीनाथ हुमागाईँले आफ्नै निवासमा सोमबार कोभिशिल्डको दोस्रो मात्रा खोप लगाएपछि भने “ आज म खुशी छु । नगरपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।” उनलाई नगरपालिकाको स्वास्थ्यकर्मी टोलीले घरमै पुगेर खोप लगाइदिएको थियो ।...
काठमाडौँ २५ साउन । महेन्द्रनगरमा रहेको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा बाल चिकित्सा कोभिड अस्पताल निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । तेस्रो लहरको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि अस्पतालले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बालबालिकालाई लक्षित गरी रु ९० लाखको लागतमा ५० शय्याको अस्पताल भवन निर्माण गर्न लागेको हो । भवन निर्माणका लागि निर्माण सेवा कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौताको कार्य भइसकेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशीले बताए । उनका अनुसार बालबालिकालाई लक्षित गरी...
आजदेखि ‘कोभिशिल्ड’ को दोस्रो मात्रा
काठमाडौँ, २५ साउन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आजदेखि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ‘कोभिशिल्ड’ लगाएका व्यक्तिलाई दोस्रो मात्राको खोप दिइन थालेको छ । मन्त्रालयले ६५ वर्षमाथि उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिशिल्डको दोस्रो मात्राका रुपमा ‘एस्ट्राजेनिका’ खोप आज र भोलि दिन थालिएको हो । भूटान र जापानबाट ‘एस्ट्राजेनिका’ खोप आइसकेपछि मन्त्रालयले कोभिशिल्डका रुपमा उक्त खोप लगाउन थालेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए । उनले कोभिशिल्ड र एस्ट्राजेनिका खोप एउटै कम्पनी र एउटै सूत्रमा...
चौतारा अस्पतालमा पिसिआर मेसिन
काठमाडौँ २४ साउन । जिल्ला सदरमुकामस्थित चौतारा अस्पतालमा कोरोना परीक्षण गर्न पिसिआर मेसिन आइपुगेको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा सो उपकरण ल्याइएको हो । अब स्वाब परीक्षणका लागि धुलिखेल जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । बाँदर र बँदेलको आतङ्क जिल्लाको इन्द्रावती गाउँपालिका– ५ का कृषक बाँदर र बँदेलको आतङ्कदेखि हैरान भएका छन् । लगाएको बाली दिउँसै बाँदरले खाएर हैरानी खेपिरहेका स्थानीयबासी कुमार आचार्य दुखेसो पोखे । उनले भने, “हामी त भोक...
काठमाडौँ २३ साउन।जापान सरकारले उपलव्ध गराइएको एस्ट्राजेनेका खोपको पहिलो खेप काठमाडौं आइपुगेको छ । जापान सरकारले कोभ्याक्स परियोजना अन्तर्गत नेपाललाई उपलव्ध गराएको खोपको पहिलो खेप काठमाडौं आइपुगेको हो । कतार एयरवेजको विमानमार्फत ३ लाखभन्दा बढी डोज खोप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेको हो । जापान सरकारले नेपाललाई १६ लाख डोज खोप सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सोही योजनाअनुसार शनिबार र आइतबार ८ लाख डोज खोप नेपाल भित्रिने बताइएको छ । बाँकी...
काठमाडौँ २२ साउन । भुटानले पठाएको कोभिड १९ विरुद्धको एस्ट्राजेनेकाको तीन लाख डोज खोप काठमाडौँ आइपुगेको छ । खोप बोकेर थिम्पुस्थित पारो विमानस्थलबाट उडेको ड्रुक एयरको कार्गो विमान शुक्रबार विहान ९ : ४० बजे त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण गरेको हो। स्वास्थ्य सेवा विभागले शनिबार भुटानबाट खोप आउने जनाएता पनि एक दिनअघि नै भुटानले खोप पठाएको हो ।
काठमाडौँ २१ साउन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यही साउन २३ देखि २९ गतेसम्म देशभर मास्क अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । ‘महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा मेरो प्रतिबद्धता मास्क लगाउनु नै आजको आवश्यकता’ भन्ने मूलनाराका साथ मन्त्रालयले अभियान सञ्चालन गर्न थालेको हो । मन्त्रालयले मास्क लगाई मानिसको व्यवहारमा परिवर्तन गर्न अभियान सञ्चालन गर्न थालेको बताइएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समीरकुमार अधिकारीले कोरोना भाइरसबाट बच्न मास्क अभियान सञ्चालन गर्न थालिएको बताए । उनले...
भेरोसेलको दोस्रो मात्रा शुक्रबारदेखि दिने
काठमाडौँ २० साउन। सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धका खोपको दोस्रो मात्रा आगामी शुक्रबार (यही साउन २२ गते) देखि सञ्चालन गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना भाइरसविरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा आगामी शुक्रबारदेखि लगाउने निर्णय गरेको हो । गत असार २९ गतेदेखि सञ्चालन भएको पहिलो मात्रा खोप लगाएका ५५ वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका मानिसलाई लगाउन थालिएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ । दोस्रो मात्राको...
पछिल्लो २४ घण्टामा १९ सय २५ जनाले जिते कोरोना संक्रमण
काठमाडौं, १८, साउन। पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा १९ सय २५ जनाले कोरोना संक्रमण जितेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कुल संक्रमितमध्ये चार दशमलव ५२ प्रतिशतले संक्रमण जितिसकेका छन्। त्यस्तै संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या छ लाख ५८ हजार १२२ रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। हाल नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या सात लाख ६२ हजार ३८७ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आज करिब दुई लाखले कोरोना विरुद्धको खोप लगाए
काठमाडौँ, १७, साउन । आज आइतबार मात्रै करिब दुई लाख मानिसले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार २४ घण्टामा एक लाख १५ हजार १३२ जनाले खोप लगाएका हुन् । पछिल्लो समय नेपालमा कोभिडविरुद्धको पहिलो दास्रो मात्रा भेरोेिलको खोप लगाउन थालिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोभिडविरुद्धको दुवै मात्रा पूरा गरेका १८ लाख १३ हजार ४७१ छन् । पहिलो मात्रै लगाएका ४० लाख ६४ हजार...
पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार २० जनाले जिते कोरोना संक्रमण
काठमाडौं। पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा दुई हजार २० जनाले कोरोना संक्रमण जितेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा छ लाख ५६ हजार १९७ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भइसकेका छन्, भने संक्रमणमुक्त हुने दर ९४ दशमलव १ प्रतिशत छ। नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या सात ५९ हजार ३०७ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कोरोनाका बिरामी बढेसँगै टेकु अस्पतालमा थपियो बेड
काठमाडौा, १७, साउन । कोरोना भाइरस संक्रमणका बिरामी बढेपछि टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा संक्रमित विरामीका लागि बेड थपिएको छ । पछिल्लो केही दिनयता फेरि कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामी बढेर बेड अभाव हुँदा बिरामी मर्कामा परेका थिए । आइतबार कोरोनाका बिरामीलाई लक्षित गर्दै थप दस बेड थपेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । कोरोनाका बिरामी बढेसँगै अस्पतालको प्रांगणको खुला स्थानमै बिरामीको उपचार हुँदै आएको थियो । अक्सिजन चाहिने बिरामी पनि बेड अभावमा अस्पताल...